Daraasiin dad ah oo lagu dilay Wadanka Siiriya 24-kii saac ee la soo dhaafay – SBC
Daraasiin dad ah oo lagu dilay Wadanka Siiriya 24-kii saac ee la soo dhaafay
Posted by Webmaster on January 8, 2012 Comments
Kooxaha dhaqdhaqaaqa ka wada wadanka suuriya ayaa sheegay in ku dhawaad 27 qof lagu dilay isku dhacyadii ugu danbeeyay ee ka dhacay wadanka suuriya kuwaasi oo ciidamada amaanka ay ku toogteen Magaalooyinka ay xiisadu ka taagan tahay.
Dadka la dilay 24-kii saac ee la soo dhaafay waxaa lagu dilay Magaalooyinka Homs iyo Idlib oo ah goobaha ay dibadbaxyada rabashadaha leh ka wadaan kooxaha ka soo horjeeda hogaanka wadanka Suuriya ee Bashaar al Asad.
Dhimashadan iyo isku dhacan ayaa yimid ka dib markii dowlada suuriya ay aas u sameynaysay dad ku dhintay qaraxyo ka dhacay caasimada dimishiq waxaana isku dhacay ciidamada amaanka iyo kooxaha aaska waday oo dowladu ugu horeysay.
Weerarada ugu danbeeyay ee ay ku dhinteen dadka ka badan 20 qof waxaa ku jira qaar ka mid ah laamaha amaanka ee dowlada suuriya kuwaasi oo ka mid ah kooxda waday meydadka ku dhintay qaraxii Dimishiq.
weeraradan iyo laynta dadkani waxay imaanayaan xilli dalkaasi ay joogaan gudi korjoogto ah oo ka socda Jaamacada carabta kuwaasi oo eegaya xaalada nabad ku soo dabaalida dalkaasi sida ay usocoto laakiin waxaa iska soconaya laynta tooska ah ee lo geysanayo dadka Wadankaasi Suuriya.
HOgaamiyaha wadanka Mr Asad ayaa horey u sheegay in dadka ay kula dagaalamayaan suuriya ay yihiin kooxo nabad diid ah oo argagaxiso ah sida uu hadalka u dhigay.